FALLO:- Dowladda Federalka ma uga faa’ideysan kartaa Fursad Diplomaasiyadeed ee Caalamka si loo dhowro Midnimadda Qaranka ???? – idalenews.com
FALLO:- Dowladda Federalka ma uga faa’ideysan kartaa Fursad Diplomaasiyadeed ee Caalamka si loo dhowro Midnimadda Qaranka ????
Mirihii Halgankii Dowladihii KMG ee ay kala hoggaamin jireen Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweynihii geeroiyooday, Allaha U Naxariistee Kornel C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa waxaa hooddo u leh inay ka macaashaan Madaxweynha Xilligan, Xasan Sheekh Maxamuud Calasow iyo xubnaha kale ee Dowladda Rasmiga ee Somalia, oo iyagu ku cusub Masraxa Siyaasadda iyo Hoggaaminta Qaranka.
In ka badan 20-sannadood ayey Somalia dibad-joog ka ahayd Masraxa Diplomaasiyadda Caalamka, inkastoo ay Beesha Caalamka horey qaab hooseeya kula dhaqmi jirtey Dowladihii KMG, kuwaasi oo u soo kal-adeegay Xilliyaddii adkaa, siiba dagaallddii cuslaa ee ay Kooxda Alshabaab kala kulmeen.
Dowladdihii KMG oo iyagu taageero Gobaleed iyo mid Caalami ah u kaashaday si loo waabiyo Himilladdii Kooxda Al-qaacidada Somalia, ayaa lagu ammaani karaa inay culayska saareen Difaaca Dowladnimadda iyo Khatartii Alqaacida la maaganaayeen Masiirka dalkeenna iyo dalkeenna.
Haddaba, Waayaha Cusub ee Dowladda Federalka ee ay ku hiigsanayso sallaanka Siyaasadda Caalamka, ayaa u muuqata mid ay Dowladaha Caalamka albaabadda u wada fureen, si boorka looga jafo Xiriirka Diplomaasiyadeed iyo Wax-wada-qabsi, iyadoo Dowlad kasta indhaha ku hayaan Danahooda Qaran ee ku aadan Dalka Somalia.
Safarkii Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud uu dhawaan ku tegay dalka Maraykanka, ayaa lagu tilmaami karaa inuu noqday mid Guul Diplomaasiyadeed xambaarsan, isla markaana Dowladda Maraykanka looga kasbaday Dib-u-soo-nooleynta Aqoonsiga Dowladda Somalia iyo Xiriirkii labada dal oo go’naa tan iyo sannadkii 1991-kii.
Aqoonsigan cusub ee Madaxda Dowladda Maraykanka ayaa laga dareemi kara inay meel iska dhigeen gocshadii xanuunka badnayd ee Ciiddankooda Rangerska ka soo gaartay Hawlgalkii Fashimay ee Rajo-soo-celinta Somalia, taasi oo lagu dilay 16-Askari, laguna dhaawacay 80-kale.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inuu Aqoonsigaasi dhabaha u xaariayo inay Dowladaha Caalamka dib u soo celiyaan Xiriirkooda dalka Somalia, maadama Somalia ku taallo Mandiqad Istaraatijiyad leh, wallow ay bahal-galeen noqotay.
Falaanqeynta Aqoonsiga Aqalka Cad ee laga dhawaajiyey ayaa waxa uu farriin cad u yahay Hoggaamiyayaasha ku talamayey Gooni-goosashadda Goballadda W/galbeed ee dalka Somalia, oo iyagu naxdin siyaasadeed ka qaaday Go’aanka Maraykanka, una arkeen Aqoosniga Dowladda Federlka mid soo af-meeray doonistoodii ahaa inuu Caalamka u aqoonsado dal madax-bannaan.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inuu Aqoonsigaasi si cad looga dheehan karo in Midnimadda Somalia tahay mid muqadas ah, iyadoo ay Beesha Caalamka rumeysan tahay inay Jamhuuriyadda Somalia loo aqoonsan yahay Hal Qaran oo mideysan oo leh Xuduudihii sannadkii 1960-kii.
Siyaasiyiinta Gooni-goosadka Somaliland u ololeeya, kuwa Mucaaradsan Aragtidaasi iyo inta badan Dadweynaha ku nool Goballadda W/galbeed ee dalka Somalia, ayaa waxay hadal-hayaan Aqoonsiga Dowladda Maraykanka ee Midnimadda Somalia, iyagoo u kala fasirtay siyaabo kala duwan.
Eng. Faysal Cali Waraabe oo hoggaamiya Xisbi Mucaaradeed, ayaa sheegay inuu Aqoosnigaasi bohol ku riday Rajaddii ku aadanayd Aqoonsiga Gooni-go’a Somaliland.
Sidoo kale, waxaa ka hadal u baahan yahay Mustaqbalka Wada-xaajoodkii u socday Dowladdda Somalia iyo Maamulka Somaliland ee GoballaddaW/galbeed, iyadoo aan la ogeyn inuu sii soconayo Wada-xaajoodka iyo inuu meesha ka baxay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo wax laga weydiiyey Gooni-goosadka Somaliland, waxa uu ku celiyey inaan marnaba gorgortan laga geli karin Midnimadda Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa isweydiin mudan Dowladda Federalka ma ka faa’ideysan kartaa Fursadda Diplomaasiyadeed ee Caalamka, dib-u-soo-celinta Haykalka Dowladnimo, Soo-celinta Nabadda, Dib-u-heshiisiinta, dhismaha Maamul-gobaleedyadda iyo dhowridda Midnimadda Qaranka?
Waa hawl adag oo u baahan Waddanimo iyo Dulqaad isku soo dumi kara Ummadda Soomaalida ee kala qoqoban, si loo soo celiyo Midnimadda Qaranka.
Helary Clinton ‘’Xiriirka Somalia iyo Mareykanka kuma ekaan doono aqoonsiga’’